Masar Oo Brazil Kula Biirtay Wareega 8da Ciyaaraha Olimbikada, & Great Britian Oo Reebtay Uruguay. - jornalizem
Masar Oo Brazil Kula Biirtay Wareega 8da Ciyaaraha Olimbikada, & Great Britian Oo Reebtay Uruguay.
Xulka Masar ayaa kula biiray Brazil wareega 8da ee ciyaaraha Olimbikada kubada cagta raga, waxaana ay wareega 8da ku wajihi doonaan Japan ka dib markii ay 3-1 ku xaaqeen xulka Belarus.
Kooxda kaalinta 1aad kaga soo baxday Group C ee Brazil ayaa si sahlan kaga badisay New Zealand oo ay ku dardareen 3-0, waxaana ay wareega 8da la ciyaari doonaan Honduras.
Mexico ayaa iyadana ciyaarteedii ugu danbeysay ee Group B waxa ay 1-0 kaga badisay Switzerland, waxaana ay u sahashay inay kaalin koowaad kaga soo baxaan South Korea.
Group D, Japan iyo Honduras ayaa ka soo baxay inkastoo barbaro goolal la’aan ahay ku kala baxeen, Spain oo group-kaan ka hartay ayaa heshay dhibicdeedii ugu horeysay.
Shabaqa ayay ka soo taaban waayeen Morocco oo ay ku kala baxeen barbaro goolal la’aan ah ciyaar ka dhacday Old Trafford, inkastoo ay fursado badan ay abuureen, hadana waxa ay tartankaan kaga hareen iyagoo aan shabaqa soo taabinin gabi ahaanba.
Midkoodna South Korea ama Gabon ma aysan la helin kubada shabaqa, lakiin dhibicda ay heleen Korea ayaa u keentay inay ka sarre marayaa Switzerland, islamarkaana wareega 8da ay la ciyaaraan xulka Mexico.
Xulka Great Britian ayaa weli sii wada ka muuqashadooda ciyaaraha Olimbikada kubada cagta raga markii ay 1-0 ku garaaceen xulka Uruguay, iyagoo xalaaleystay booskooda wareega 8da ee tartankaan markii ugu horeysay tan iyo 1956dii ciyaarihii Olimbikada ee ka dhacay Melbourne.
Gool uu dhaliyay Daniel Sturridge ayaa ugu filnaa Britian inay ku soo baxdo kaalinta koowaad ee Group A, waxaana ay wareega 8da la ciyaari doontaa maalinta sabtida xulka South Korea.
Isla group-kaan A waxaa kaalin labaad ku soo baxday Senegal oo barbaro 1-1 ah la gashay xulka Imaaraadka carabta, waxaana ay Senegal wareega 8da ay la ciyaari doontaa Mexico.